Ejiri maka iji ihe eji eme ihe. Site na nbibi zuru oke nke polymer dị elu na ngwaahịa plastik n'efu, ha na-alaghachi na steeti obere molekul ma ọ bụ monomers iji mepụta mmanụ ọkụ na mmanụ ọkụ siri ike. N'okpuru ebumnuche nke nchekwa, nchekwa gburugburu ebe obibi, na ịrụ ọrụ na-aga n'ihu ma kwụsie ike, Ntugharị, enweghị mmerụ ahụ, na mbenata plastik n'efu. Company'slọ ọrụ na-emepụta ihe eji emepụta pyrolysis na-emepụta ihe na-eji ihe pụrụ iche mejupụtara ya na ihe nnọchi anya dechlorination pụrụ iche iji wepụ gas gas dị ka hydrogen chloride nke cracking PVC mere n'oge, na-agbatị ndụ ọrụ nke akụrụngwa ahụ.
A ga-agbajikwa iberibe taya mgbe eriri na-ebu eriri, eriri eriri, ihe nkedo, wdg na nrụgide na-adịghị mma na usoro pyrolysis na-aga n'ihu site na pyrolysis, na usoro mgbe gas na-emeghachi omume okpomọkụ 450-550 ℃ n'okpuru ọnọdụ nke ngwa ngwa ngwa ngwa pyrolysis mmeghachi omume, mepụta mmanụ pyrolysis, carbon carbon, waya pyrolysis na gas combustible, gas combustible site na nkewa nke mmanụ na gas mgbake unit mgbe banye n'ime ọkụ gbawara stovu ọkụ, maka dum mmepụta usoro na-enye mmeghachi omume okpomọkụ, nweta onwe-ojuju na ume;
Uzo ahihia ahihia ahihia bu uzo zuru oke nke na-ekewaputa ihe ato ato di n’ime taya: roba, waya nchara, na eriri na ulo oku ma mata na 100% imeghari. Usoro mmepụta nke ahihia ahihia nwere ike imeghari taya n'ime uzo di omimi nke 400-3000mm dika ihe ndi ahia choro, jiri ike di ike, enwere ike ichikota nhaputa nke di na 5-100mm, na mmeputa nwere ike iru 200-10000kg / h . Usoro mmepụta ihe na-agba ọsọ na ụlọ okpomọkụ ma ọ gaghị akpata mmetọ nke abụọ na gburugburu ebe obibi. Usoro mmepụta ahụ nakweere sistemụ njikwa PLC, nke dị mfe ịrụ ọrụ ma debe ya, yana obere ume ike na ndụ ogologo ndụ.
Esi mmiri ọkụ burner na-ezo aka ji esi mmiri ọkụ burner, ji esi mmiri ọkụ burner mmanụ ọkụ na gas ji esi mmiri ọkụ bụ ihe kasị mkpa na-akwado inyeaka akụrụngwa, ji esi mmiri ọkụ burner bụ tumadi kewara n'ime mmanụ ọkụ burner na gas burner na sọrọ mmanụ burner, gụnyere mmanụ burner nwere ike kere n'ime mmanụ mmanụ burner na mmanụ dị arọ, mmanụ ọkụ na-ezo aka na mmanụ dizel, mmanụ dị arọ na-ezo aka na mmanụ mmanụ mmanụ, mmanụ dizel mgbe mmanụ ndị ọzọ fọdụrụnụ; A ga-ekewa ndị na-ere ọkụ gas na ndị na-ere ọkụ gas, ndị na-ere gas gas, ndị na-agba LPG na ndị na-agba biogas.
Ihe site n'agba crusher agbajikwa, n'okpuru ihe nke ịwụ mbuli, e zigara nchekwa biini, mgbe site akpa akpa jijiji feeder ga-anapụta ihe evenly na n'usoro ka Raymond na nkume igwe nri maka-egweri, mgbe egweri ntụ ntụ n'okpuru ihe nke na-afụ ụfụ fụrụ na sorting analysis igwe, mgbe nkewa nke ihe site na pipeline na nnukwu cyclone iji nakọta uzuzu, emesia na nputa nke ihapu onu, iji mezue usoro ngba nke carbon nwa.
A na-ewepụta mmanụ pyrolysis nke plastic na-ekpofu ahịhịa na taya mkpofu ọzọ. Isi teknụzụ nwere ike iru ọkọlọtọ nke 0 # ma ọ bụ -10 # mmanụ dizel ma enwere ike iji ya kama nke ikpeazụ. Ọnụahịa ahụ nwekwara ike ịgbakwunye site na $ 230 / ton karịa mmanụ mmanụ.
A na-eji ya maka Mbelata, na-adịghị emerụ ọgwụgwọ na akụ itinye n'ọrụ akụ nke sludge na-aghọta ala remediation. Site na ikewapu mmiri na ihe ndi ozo n'ime sludge site na ala, ihe ndi na-aru oru mmanu n'ime ihe siri ike mgbe nkpuchi ogwu di ihe kariri 0 05%. N'okpuru ebumnuche nke nchekwa, nchekwa gburugburu ebe obibi, na ịrụ ọrụ na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ siri ike, Mbelata sludge, ọgwụgwọ na-adịghị njọ na itinye n'ọrụ.
Ihe mkpofu obodo na ihe mkpofu ụlọ nwere ihe niile a na-atụfu kwa ụbọchị. A na-etinyekarị mkpofu a n'ime akpa ojii ma ọ bụ ihe nchekwa nke nwere ngwakọta nke mmiri na akọrọ recyclable, organic, inorganic and biodegradable materials.
Ihe mkpofu obodo na nke ụlọ na-enwekarị ihe ndị a na-eri kwa ụbọchị. Isdị ihe mkpofu ndị a na-etinyekarị n’ime akpa ojii ma ọ bụ ihe mkpofu ahịhịa, nke nwere ngwakọta mmiri na akọrọ recyclable, organic, inorganic na biodegradable ihe.
Ngwa akụrụngwa ọgwụgwọ ụlọ na-enyocha ma mepụta site na ụlọ ọrụ anyị na-akpaghị aka site na inye nri ruo na njedebe usoro nhazi. Ọ nwere ike ịhazi 300-500 tọn kwa ụbọchị ma chọọ naanị mmadụ 3-5 ka ha rụọ ọrụ. Ngwaọrụ niile anaghị achọ ọkụ, akụrụngwa kemịkal, na mmiri. Ọ bụ oru eji echekwa gburugburu ebe obibi nke steeti kwupụtara.
Usoro pyrolysis bụ otu ụzọ zuru ezu ma baa ụba bara uru na ọgwụgwọ nke taya na-ekpofu ahịhịa. Site na teknụzụ pyrolysis nke akụrụngwa ihe mkpofu ahihia, akụrụngwa dị ka taya na mkpofu ahihia nwere ike ịhazi iji nweta mmanụ, waya ojii na waya nchara. Usoro a nwere njirimara nke mmetọ efu na mkpụrụ mmanụ dị elu.
Imefusị rọba, Taya Pyrolysis, Imefusị Taya Recycling Machine, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Ogbe Pyrolysis Osisi,